CUA : hafindra etsy Antanimbarinandriana ireo « mpibizina » fiara | NewsMada
CUA : hafindra etsy Antanimbarinandriana ireo « mpibizina » fiara
Manomboka amin’ny tapa-bolana, tsy hisy « mpibizina » fiara intsony etsy Analakely. Hafindra etsy Antanimbarinandriana avokoa izy ireo.
Voaresaka nandritra ny filankevitra kaominaly, ny alatsinainy teo, fa hafindra etsy amin’ny tany malalaka etsy Antanimbarinandriana ireo « mpibizina » fiara etsy Analakely. Nohavaozina ho fiantsonan’ny fiara mihitsy io toerana io ary eo am-pamaranana ny asa ny kaominina. Mbola apetraka ny mari-pamantarana rehetra eny amin’ny tany hanamorana ny fivoahana sy ny fidiran’ny fiara eo.
Miverina ho toeram-piantsonan’ny fiara toy ny teo aloha, araka izany, ny eny an-toerana rehefa tsy nahomby ny vinavina napetraka teo aloha. Hisokatra afaka tapa-bolana izany toerana izany.
Anisan’ny mameno ny toerana etsy Analakely tokoa ireo « mpibizina” fiara. Mihevitra izy ireo fa efa azy mihitsy izany toerana izany ka tsy azon’ny hafa ipetrahana. Mahavatra manakorontana ireo fiara sasany mipetraka eo mihitsy ireo mpibizina ireo rehefa sendra mipetraka eo amin’ny toeran’ny fiarany ny an’ny hafa.
Efa anjatony ireo fiara amidy manemitra ny toerana etsy Analakely. Tsy mahita ipetrahana intsony izay manan-draharaha eny an-toerana fa bodoin’ireo mpibizina ireo ny toerana. Mandoa vola amin’ny Easy Park izy ireo ka tsy azo kitikitihina.
Nodinihin’ny filankevitra monisipaly ihany koa fa tsy maintsy omena toerana ny Easy Park hametrahana ireo fiara nosaziny satria efa tafiditra tamin’ny fifanarahana tamin’ny kaominina izany.